April 2017 – Ministry of Education in Puntland
April 29, 2017 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo furtay shir looga hadlayo Turxanbixinta iyo ansixinta Manhajka Dugsiyada sare ee Puntland.
29/April/2017- Waxaa magalada Garowe xarunta Puntland ka furmay shirwayne ballaaran oo lagu turxanbixinta iyo ansixinayo qaab dhismeedka manhajka waxbarashada Dugsiyada sare ee Puntland, kaasoo ay soo qaban qaabisay wasarada waxbarashada […]
April 25, 2017 / News
Dugsiga sare Demada eyl oo ka qalan jabisay ardayda Sanadka imtixaanka u fariisanysa.
25/April/2017- Dugsiga sare ee Degmada eyl ayaa waxaa ka qalan jabiyey arday gaaraysa 30 arday oo isku jira wiilal iyo Gabdho. Xaflada Qalan jabinta ayaa waxaa ka soo qayb galay […]
April 24, 2017 / News
Wasaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo iclaamisay Imtixaamadkii naqliga ee sanad dugsiyeedka iyo imtixaanka shahaadiga ah 2016-2017.
Isniin April- 2017)-Gudoomeyeyaasha Waxbarsahada Goboladda, degmooyinka iyo maamulayaasha dugsiyada waxay si buuxda ayey fuliyeen , iyagoo Tixgalinaya warqaddii ka soo baxaday Xafiiska Waaxda Tayo-dhowrka iyo Kormeerka ee Wasaaradda Waxbarashda iyo […]
April 23, 2017 / News
Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo dhagax dhigtay Duggsi sare Al- Xigma ee Magalada Garowe.
22/April/2017- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa duleedka bari ee magaalada Garowe ka dhagax dhigay dugsi sare oo uu yeelan doono Iskuulka hoose/dhexe ee Al-Hikma. Dugsigaan oo […]
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo Warbxin ka baxiyey Tacliinta sare dowlada Puntland Waxay ka Qabatay dhowrkii sano oo la soo dhaafay.
Is Af- garad Wada shaqayn oo u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland iyo maamulka Degmada Gaalkacayo.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Taclinta sare ee Dowlada Puntland oo la kulmay Maamulka Waxbarshada Magalada Galkacayo.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland oo booqday Barkacayaasha abaartu Saamaysay ee Magalada Buur-saalax
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland iyo Hay’adda Care oo Magalada Buur-saalax ka furay Boarding Casri ah.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Tartanka Gabayada u qabatay Qayb kamid ah iskuulada Puntland.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ansixinysa buuga qorshaha shanta sano oo soo socota.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo ka qayb galay shir Waxbarashada ah oo lagu daahfurayo Jubaland.